Nkenke mbara gia reducer
Nmrv worm gia reducer, ọ bụ obere na olu, ìhè arọ, elu na radiating arụmọrụ, nnukwu na mmepụta torque, ezigbo na-agba ọsọ na ala mkpọtụ. Ọ bụ suitbale niile ọnọdụ.
R usoro helical gia reducer bụ elu imewe echiche ẹkenam si ná mba ọzọ na-adịbeghị anya. Ọ na-mepụtara na-arụpụtara na ezi uche Ọdịdị, ike egosipụta, elu pụrụ ịdabere, ala okpomọkụ ịrị elu, nnukwu amị ike na ezi Nchikota arụmọrụ na Nchikota na ebumnobi eziokwu nke mba anyị. Ọ nwere ike na-achọkwa na F usoro, K series, S usoro, wdg nweta ala ọsọ na ukwuu torque.
Devo R Series ụkwụ n'ịnyịnya helical gia reducer
Devo R Series RX 37 ~ 157 isiike eze iyi tojubigara ókè singl ...
WPA gia reducer kwụ gia igbe vetikal w ...
WPA ọsọ reducertransmission gia reducer Horaị ...
WPA WPS worm ọsọ reducer reductor gearbox wpa ...
(J) ZQ 250-1000 Series soft gia n'elu gearbox ...
(J) ZQ 850 soft gia n'elu gearbox maka constru ...
(J) ZQ 650 soft gia n'elu gearbox maka constru ...
Elu àgwà RX usoro helical gia reductor
elu mma zq 500 gia reducer zq 350 gearbo ...
nri n'akuku mbara reducer nzọụkwụ gearbox serv ...
2019 zuru ụwa ọnụ na-ekpo ọkụ ahịa elu torque ọsọ reducer ...
Jiangsu Devo Gear Technology Co., Ltd. e hiwere na 2018. Ọ na-tọrọ ntọala site na otu ìgwè nke na-eto eto na uchu spirit. Ọ na-ekpebisi ike ime ka a dị mma gia igbe na 100 afọ. The ụlọ ọrụ bụ 50-100 ndị mmadụ, na-ọkachamara R & nkwupụta ụda; D, imewe, sales otu, ngwaahịa ere ọma n'ụlọ na mba ọzọ, ndị ahịa bụ tumadi lekwasị overseas.Provide ahịa na ahaziri solutions.On ndabere nke reciprocity na nkwanyerịta
Nke 403, Iwuli 2, Ihe Market, Nke 170, Xiadian Road, Xuzhou, Jiangsu, China (Chile)
gearbox Nmrv , Nmrv Worm gearbox , Nmrv050, Nmrv Reducer, Nmrv63, Nmrv130,